नेपाली जनताको प्रेम कहिल्यै डगमगाउँदैन: गोविन्दा - Harekpal
Friday, Feb, 21, 2020 ९ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार
नेविसंघको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप, अध्यक्ष र तीन महामन्त्रीसहित दर्जनौँ नेता घाइते
न्यायपालिका आशाको अन्तिम केन्द्रबिन्दु : प्रधानन्यायाधीश जबरा
शान्ति सुरक्षा चुस्त राख्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई गृहसचिवको निर्देशन
बास्कोटाको राजीनामा स्वीकृत, सञ्चार मन्त्रालय हेर्ने जिम्मा अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई
डोटीमा अज्ञात समूहद्वारा डोजरमा आगजनी
मन्त्री बास्कोटाद्वारा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको पुष्टि
हरेकपल सम्वाददाता २१ कार्तिक २०७६, बिहीबार १२:२० मा प्रकाशित
बलिउड सुपरस्टार गोविन्दा बाक्लै नेपाल आउने गरेका छन् । उनकी श्रीमती सुनिता अहुजा नेपाली मुलकी हुन् । उनको जन्म काठमाडौंको साखुँमा भएको थियो । श्रीमती नेपाली भएका कारण गोविन्दा नेपाललाई आफ्नो ससुराली देश बताउने गर्दछन् । उनी कामको शिलशिलामा थुप्रै पटक नेपाल आइसकेका छन् । नेपाली भाषा राम्रोसँग बुझ्ने उनले पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आफू पटक-पटक नेपाल आउने गरेको बताउँछन् ।
गत वर्ष राजधानीमा भएको ‘एलजी फिल्म अवार्ड’ मा सहभागी हुन उनी छोरीसहित नेपाल आएका थिए । अभिनेता गोविन्दा मंगलबार फेरि नेपाल ओर्लिएका छन्, श्रीमती सुनितासँग । उनी विरगञ्जमा कात्तिक २१ गतेबाट सुरु हुन लागेको ‘स्वर्णिम चलचित्र महोत्सव’ मा सहभागी हुन नेपाल आएका हुन् । भोली बिहान उनी विरगञ्ज पुग्ने कार्यक्रम छ । त्यहाँ उनले आफ्नो प्रस्तुती पनि दिने बताइएको छ । उनले नेपालको केही पर्यटकिय स्थलको भ्रमण पनि गर्दैछन् ।
मंगलबार दिउँसो तीन बजे त्रिभुवन विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले नेपाली जनताले दिएको मायाप्रति आफू आभारी रहेको बताए । ‘तपाईंहरुबाट मैले धेरै माया, प्रेम, स्नेह र सम्मान पाएको छु । यो सधैं रहन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । यहाँको मलाई सबैभन्दा मनपर्ने भनेको प्रेम हो, जुन कहिल्यै डगमगाउँदैन’, उनले भने । गोविन्दाले आफूलाई गुन्द्रुकको झोल र भात खान एकदमै मन लागेको बताए ।
नेपाली चलचित्रमा अभिनय गर्न निकै मन लागेको बताउने उनलाई पत्रकारले एउटा जिज्ञासा राखे( ‘नेपाली चलचित्र हेर्नुभएको छ रु’ नेपालीबाट पत्रकारले सोधेको प्रश्नको श्रीमती सुनिताले अंग्रेजीमा उल्था गरेपछि गोविन्दाले हिन्दी भाषामा भने( ‘हेरेको छु । तर, पूरै हेरेको छैन । म मेरै चलचित्र त पूरै हेर्दिनँ ।’ उनले विरगञ्जमा हुने महोत्सवमा आफ्नो माग भएको खण्डमा नृत्य प्रस्तुत गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । तर, तयारी गरेर भने नआएको उनको भनाई छ ।
मंगलबार अभिनेता गोविन्दासँगै महोत्सवमा सहभागी हुन भारतको मुम्बईमा बस्दै आएकी नेपाली अभिनेत्री निरुता सिंह पनि नेपाल ओर्लिएकी छन् । आफू बाल्यकालदेखि नै गोविन्दाको ठूलो फ्यान रहेको बताउँदै उनले पहिलो पटक भेट हुँदा अत्यन्त खुसी महशुस भएको बताइन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने ‘स्वर्गिम चलचित्र महोत्सव’ कात्तिक २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म चल्दैछ । यसको आयोजक चलचित्र निर्माता संघ हो ।
८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १३:५०
‘आमा’ चलचित्र भोलीबाट प्रदर्शन हुँदै
७ फाल्गुन २०७६, बुधबार १५:१७
मलेसियाको हेरिटेज पेजेन्टसमा नेपालको प्रतिनिधि परिन्दा र परिसा
४ फाल्गुन २०७६, आईतवार १२:३५
१ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०९:२९
२७ माघ २०७६, सोमबार १६:१२
२७ माघ २०७६, सोमबार १६:०८
आज प्रदोषव्रत, हेर्नुहोस् २०७६ फाल्गुन ८ गते
आज विजया एकादशीव्रत, हेर्नुहोस् २०७६ फाल्गुन ७ गते
आज मंगलवार, कस्ता कार्यका निम्ति शुभ रहनेछ ? हेर्नुहोस् २०७६ फाल्गुन ६ गते
व्यवहार कसरी चलाउनु पर्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन
कस्ता व्यक्तिलाई तामसी भनिन्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन
कस्ता व्यक्तिको संगत गर्नु हुँदैन ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन